सेरा, शिक्षा र स्पोकन वर्ड पोइट्री	| Word Warriors
पुस १७ –
कार्यक्रम हुनुभन्दा केही घन्टाअघि गेटमा लागेको
कार्यक्रमस्थलमा उनको किताब किन्नलाई लागेको लस्कर !
कार्यक्रम सकिनासाथ बुक साइन गर्न लागेको लस्कर !
लस्करमा…फेसबुक, टि्वटर र यु ट्युब पुस्ता । त्यो पनि कविता सुन्न । झट्ट विश्वास गरिहाल्न गाह्रो पर्ने । तर, गत शनिबार त्रिपुरेश्वरस्थित फ्रान्सेली सांस्कृतिक केन्द्रमा ७ सयको हाराहारीमा युवा लस्करमा देखिए- स्पोकन वर्ड अमेरिकी कवयित्री सेरा केको कविता सुन्न ।
‘नो म्याटर द रेकेज ः सेरा के इन काठमान्डु’ कार्यक्रमका प्रि-सेल टिकेट सोल्ड आउट भएपछि आयोजकद्वय किहोटेज कोभ बुकसप र वर्ड वारियर्सलाई कार्यक्रमस्थल नै सार्नुपर्‍यो । त्यसैले, ‘कविता’ भनेपछि धेरैजसो नाक खुम्चाउने, ‘नट सो कुल’ सोच्ने पुस्ता टिकटै किन्दै लस्कर लागेर कविता सुन्न पुगेको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक थियो । यो भीडमा देखिएका युवालाई पुसको जाडोमा खुला आकाशमुनि कविता सुन्न लालायित बनाउने कवयित्री सेरा नै हुन् या कविताप्रति उनीहरूको बढ्दो आकर्षण हो, छुट्याउन अलि गाह्रो पर्‍यो ।
तर यसको उत्तर पाउन धेरैबेर प्रतीक्षा गर्नुपरेन जब स्टेजमा कविता प्रस्तुत गरिन थाले । कविता ‘सो कुल’ भयो । कविता ‘वाउ’ भयो । कविता ‘ओ माई गड’ भयो । फरक के थियो त कविता यस्तो भयो । यो युवाबीच चर्चित ‘स्पोकन वर्ड पोइट्री’ थियो । ‘स्पोकन वर्ड पोइट्री’ भनेर सामान्यतया बुझ्दा लेख्नेमात्र नभई स्टेजमा प्रस्तुत गर्नेलाई बुझिन्छ । यसमा शब्दसँग जति खेलिन्छ त्यति नै प्रस्तुतिमा जोड दिइन्छ । अमेरिकी काव्य-साहित्य क्षेत्रमा ९० ताका सुरु भएको यस अभियानले नेपालमा सन् २०१० मा मात्र संस्थागत रूप लिएको थियो- ‘वर्ड वारियर्स’ बाट ।
‘यो कलात्मक अभिव्यक्तिका लागि एक सजिलो साधन हो,’ वर्ड वारियर्सका कार्यक्रम संयोजक समीप ढुंगेलले भने, ‘यो एकदमै मनोरञ्जनात्मक त हुन्छ नै, यसको प्रस्तुति र सरलताले युवालाई कविताप्रति इच्छुक पनि बनाउँछ ।’ अरू कलात्मक अभिव्यक्तिहरू- संगीत, रंगमञ्च, कथावाचन पनि मिसाइने यस विधालाई समूहमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
यस्तै विभिन्न अभिव्यक्तिका विधाबाट ‘स्पोकन वर्ड पोइट्री’ को स्वाद चखाएर वर्ड वारियर्सले तताएको दर्शकबीच सेरा आइन् । सुन्दर, हँसिलो अनुहार, मन्त्रमुग्ध पार्ने उनको स्पष्ट स्वर र उनको त्यो खुला हाँसो । दर्शकबीच उपस्थित केहीले ढुकढुक भएको आफ्नो मुटु थाम्न छातीमा हात राखे, केहीले खुसीका आँसु खसाल्लान्झैं गरेर मुख छोप्दै विस्तारै भने, ‘ओ माई गड !’
सेरालाई स्टेजमा देख्दा ‘आई कान्ट बिलिभ’ भनेर आँखा दुई-तीनपटक बन्द गर्दै खोल्ने जमात्मा पाटनकी प्रतिमा पाण्डे पनि थिइन् । ‘मेरो त सपना नै पूरा भयो,’ उनी भन्छिन् । कविता लेखनमा त्यति रुचि नभएकी उनी सेराको डाइ-हार्ड फ्यान बनेको धेरै भएको छैन, मात्र तीन महिना । तर, उनको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छिन् यी न्युयोर्ककी कवयित्री ।
‘उनी मलाई राम्रो शिक्षिका बन्न हरदम प्रेरणा दिन्छिन् ।’ नसोचिएको कारण बताउँछिन् प्रतिमा । ‘स्पोकन वर्ड’ कवयित्रीबाट सायद कविता लेखनतिर प्रोत्साहन धेरै हुनुपर्ने । ‘सेराको ‘मिसेज रिबेरो’ ले मलाई मेरा विद्यार्थीहरूमा प्रधानाध्यापिकाले उनको जीवनमा पारेको प्रभावझैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्छ,’ उनले थपिन् । एक निजी स्कुलकी यी २६ वर्षे शिक्षिकाको कुनै दिन सेरालाई उनका विद्यार्थीहरूमाझ लाने चाहना छ । उनी कवयित्रीको ‘प्रोजेक्ट भ्वाइस’ लाई नजिकबाट नियालिरहेकी छन् ।
सेरा, स्पोकन वर्ड पोइट्रीबाट विद्यार्थी र युवालाई शिक्षामा प्रोत्साहित, प्रेरित र सशक्तीकरण गर्ने अभियानमा छिन् उनी । त्यसैले, ‘प्रोजेक्ट भ्वाइस’ संस्थाबाट विश्व यात्रामा छिन् । यसको सह-संस्थापक रहेकी उनी २०१२ मा वर्ड वारियर्सहरूसँगै मिलेर सात दिनका लागि सुर्खेतको कोपिला भ्याली स्कुलमा पुगेकी थिइन् । यसपटक उनी वर्ड वारियर्सको राइट टु स्पिक प्रोजेक्टको करिकुलम बनाउन र युवाहरूलाई स्पोकन वर्ड पोइट्री सिकाउन काठमाडौंमै व्यस्त रहिन् । ‘उनी जति कविता लेखन र प्रस्तुतिले चर्चित छिन्, त्यति नै विद्यार्थी र युवाबीच प्रोजेक्ट भ्वाइसको अभियानका कारण प्रशंसित पनि’ समीपले सेराबारे भने ।
कार्यक्रममा उनले ‘मोन्टक’, ‘बी’, ‘द टाइप’, ‘गोस्ट सीप’ गरी चर्चित १० कविताहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै बुक साइनिङमा बसेकी सेरालाई दर्शकहरू घेर्न पुगेका थिए । उनको किताब कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै नकिनेकाहरूले बुक स्टलमा लस्कर लागेरै ‘नो म्याटर द रेकेज’ र ‘द टुथब्रस टु द बाइसाइकल टायर’ किने । अनि उनको अटोग्राफ लिन बुक साइनिङमा लागेको लामो लस्कर लम्ब्याउन पुगे । चिसिएको मौसममा बाक्लो भीडबीच सेरालाई भेट्दा कसैले उनलाई चिठी दिए, कसैले अँगालो मारे । उनले पनि कसैको किताबमा फूल बनाइदिइन्, कसैकोमा मायाको चिनो बनाइदिइन् त कसैकोमा प्रोत्साहनका हरफ लेखिदिइन् ।
Published in Hello Sukhabar, Kantipur on Jan 2, 2015